Dawlada Kenya Ayaa Sheegtay In Ay Gacanta Kudhigeen Laba Ruux Oo dooyayey In Ay Kubiiraan Ururka Al-shabaab – STAR FM SOMALIA
Booliska dalka Kenya ayaa gacanta ku dhigay labo ruux oo mid ka mid ah ay tahay haweenay, halka ruuxa kalena uu yahay rag, kuwaasi oo la sheegay inay doonayeen inay Somalia soo aadaan kuna biiraan Ururka Al Shabaab.
Labadaan ruux ayaa la qabtay xilli ay ku sugnaayeen Deegaanka Madogo ee Gobalka Xeebta, waxaana la geeyay Magaalada Gaarisa ee Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, halkaasi oo ciidamada ay ku baarayaan.
Haweenayda ciidanka ay qabteen ayaa lagu sheegay magaceeda Zakariyad Omwenga, laguna naanayso Salma iyo nin lagu magacaabo Abdi Hussien Ali, laguna naanayso Blacky ayey Booliska qabteen.
Sarkaal ka tirsan ciidamada Booliska dalka Kenya ayaa sheegay inay ka shakiyeen labadaan ruux, kadib markii macluumaad ku saabsan dadkaan looga soo gudbiyay Magaalada Mombasa, Booliskana sidaasi ay jidka ugu galeen.
Shalay ayaa labadaan ruux lasoo taagay Maxkamada Magaalada Gaarisa, balse Booliska ayaa dalbaday in la siiyo hal isbuuc oo dheeraad ah si baaritaan ay ugu sameeyaan labadaan ruux ee eedeysanayaasha ah.
Haweenayda ciidanka gacanta ku hayaan ayaa waxaa la sheegay in la doonaayay in Somalia la geeyo si uu guursado mid ka mid ah Dagaalamayaasha Ururka Al Shabaab ee ku sugan Koonfurta Somalia.
Kenya ayaa dhowr mar deeganada xududa waxa ay ka qabatay dad doonaayay inay ku biiraan Uruka Al Shabaab, kuwaasi oo qaarkood Kenyan yihiin.